Shakn, iko kunyorera kuti uwane ma singles muguta rako nenzira yakasiyana zvachose | IPhone nhau
Makore apfuura, vanhu vaiziva vatinoshamwaridzana / vatinoshanda navo nekubuda mumugwagwa uye kurovera mukati mavo. Asi izvo zvaive zvinopfuura makore gumi apfuura. Mumazuva eMSN Messenger kana IRC chats, zvaive zvatova zvakajairika kusangana nevanhu paInternet uye ini ndingati nhasi zvakajairika kusangana nevanhu vanotanga mune rakapotsa nyika kupfuura muhupenyu chaihwo. Kune akawanda mafomu e kusangana nevanhu kana kutsvaga wekufambidzana naye, asi hapana chinopa mikana yakawanda se Shakn, zano rinoenda kumberi zvishoma.
Kunyangwe zita iro rinowanikwa nechishandiso ichi muApp Store riri «Shakn - Sangana nevanhu vatsva«, Chayo chikuru (asi kwete chega) chikonzero chekuve kugona kuwana vasina varume nevakadzi muguta rako kuti uve nerudzi rwehukama hwauri kutsvaga. . Asi, kusiyana nemamwe akafanana mashandiro uye masevhisi, kunyoresa muShakn hakuite kuti tinamatire kuchombo chedu kwenguva refu tichipindura mibvunzo, asi zvichave zvakakwana kutsanangura isu tiri, zvatiri kutsvaga uye nezvatinoda, zvekupedzisira kusarudza pakati hashtags kuti iko kunyorera kuchatipa uye izvo zvichazokutendera iwe kuti utsvage tsvaga vanhu muguta rako vane zvavanofarira uye zvavanofarira.
1 Shakn ichakubatsira iwe kutaura nevanhu vakaita sewe
2 #MomentoPlan, poindi yemusangano yevasina kuroora
Shakn ichakubatsira iwe kutaura nevanhu vakaita sewe
Asi chishandiso ichi hachigumisi pamukana wekuona ma profiles sekunge iwo makadhi ekunamatira. Iyo zvakare ine izvo zvavakadaidza kuti "Nguva", zvemukati izvo isu zvatinogona kugovana paprofile yedu kuti tizvizivise isu patinofarira, zvatinofarira, nezvimwe Semuenzaniso, tinogona kuisa nziyo dzatinofarira, mapikicha edu, mabhuku atakaverenga nekufarira, nzvimbo dzatinofarira uye kunyange ma audios kuti vazive izwi redu isu tichiti kwaziwai. Nekudaro, kana mumwe munhu akashanyira chimiro chedu, ivo vanozokwanisa kudzidza zvakawanda nezvedu vasati vatanga hurukuro, uye zvinopesana. Kutenda kumaMoments isu tichakwanisa kuwana zano rekuti tinokwana here kana kwete nemushandisi iye watakada pakutanga.
Vashandisi vanopinda muprofita yedu vanogona kuona edu maNguva uye isu isu evamwe. Saka zviri nyore kwazvo kutaura nevanhu vane pfungwa dzakafanana vane zvido zvakafanana nezvatinofarira. Uye zvakare, isu tinodzivirira kutambisa nguva kutsvaga nekuona mafoto evashandisi atisina ruzivo nezvazvo tisati tataura navo.
Kune rimwe divi, Shakn anoziva kuti zvakavanzika zvakakosha kwazvo, chimwe chinhu chakaratidzirwa nezviitiko zvakaita seSan Bernardino sniper kana gakava razvino remitemo yekushandisa WhatsApp. Ichi chishandiso chinotibvumidza isu chengetedza ruzivo rwupi rwatinogovana uye tosarudza vatinoda kuti vazvione uye ndiani asingazvione. .
#MomentoPlan, poindi yemusangano yevasina kuroora
Kana izvo zvekutarisa maprofiles uye kutaura zvisina kukwana kwatiri, tinogona zvakare kushandisa izvo zvavanodaidza Ronga Nguva, Izvo zviri zvirongwa zvatinokurudzira kuitira kuti vamwe vashandisi vabatanidzwe segadziriro yekusangana nesu mumunhu. Nenzira imwecheteyo, isu tinokwanisa zvakare kusaina kuzvirongwa zvevamwe zvine mukana wekuziva kana isu tine chimwe chinhu chakafanana nekutarisa maMoments eprofile yavo.
Zviripachena kuti kune atove akawanda mafomu ekuti vatambe nerudo muApp Store uye akasiyana akasiyana mobile application zvitoro, asi wadii kubheja pane iyo inotipa ruzivo rwakawanda uye mikana?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Shakn, iko kunyorera kutsvaga ma singles muguta rako nenzira yakatosiyana
Apple data centre muDenmark ichave inzvimbo hombe yekudyara kunze kwenyika munhoroondo yenyika